Home Brawl Stars Guide Bayilimaza Stars kugula Guide & Isiphetho final [Indlela Kugcine Series]
Olu luguqulelo entsha basis of the bayilimaza Stars isikhokelo kwi website yethu. Siye sakwazi ukuqokelela zonke utshintsho kwi isiziba zamva ungadibanisa apha kwaye ke khona apho kuya kubakho eminye imiyalelo zaphambili abadlali eliphezulu.
Musa ukulibala ukubaluleka Bayilimaza Stars kugula nendlela uya ezichaphazela umdlalo yakho ukuyitshintsha look ngcono. Funda okungakumbi wako kamva apha, okunene siya kuthabatha phantsi ububanzi kukunceda ukuba uqonde ukusebenza kwalo.
Umdlalo nengxabano Stars wadalwa kwaye epapashwe "inkampani Supercell" kwaye baye bakwazi ukukhulula oko ngokusebenzisa Android kunye iOS iivenkile for free.
Akukho mfuneko ezizodwa ezifunekayo ukuze umdlalo uqalise. ukwenza nje qiniseka ukuba udityanisiwe kwi uqhagamshelwano ezinzileyo kunye esebenzayo intanethi, kungenjalo kuya kubakho ndlela ukuqalisa umdlalo an imo intanethi, ukuba ungenise phezu iinguqulelo ezizayo. Ubuncinane inkqubo yoqeqesho offline.
Kuqala phambi kokuba diving nzulu kulo mdlalo. kufuneka ukuba uyazi amagqabantshintshi ekhawulezayo malunga imo nyambalala yeminikelo yaye yintoni na kufanele ukuba siyenze ukuze ziphile kwaye abe winner. Ke kamva kwi, siza kuthetha malunga iimephu indlela ukukhetha i angaxokozeliswa elifanelekileyo imephu ngamnye kule mzuzu, nibhekise emva.
Landela iqela iseti ezayo bayilimaza Stars tips. Kwaye kude engqondweni yakho yokuphuculwa olunye utshintsho.
Yintoni Indlela Bounty?
Imowdi avela yi umdlalo ukufa. Yaye nayiphi na enye indlela ukufa umdlalo, ephambili ekujoliswe wakho ukubulala abachasi abaninzi kangangoko kunokwenzeka. Ukuyeka kwabo umngeni pool uze ubhale igama lakho ngokuziqhenya phakathi abanye abadlali.
Use the Bayilimaza Stars cheats and see them set of brawlers becoming available for you to choose from. Ngoko kuxhomekeke kwimephu kulo mzuzu, nibhekise emva. kodwa okwangoku, nje ukugxila phambili kwinqanaba ukuze uya kuba iinketho kakhulu akhona ukuba ukhethe kusuka. Nokuba yinxalenye zeli Ukudlala.
Adubula Ukucacisa Star.
Imephu lokuqala le sinayo apha imephu ukudubula inkwenkwezi. Kuyinto indawo evulekileyo ngeebhloko ezimbalwa apho, ukuze amathuba akho ukufikelela isiseko elikhuselayo uze uzame ukuba siyitshabalalise Sekukancinane ukulwisana.
Kufuneka ukuba kudlula iitoni seva emi phezu kumacala omabini lendlela kunye hits zabo iyabulala. Fumana nengxabano Iinkwenkwezi my nokuvula seva intle ukusuka evenkileni uqale zizula uze ugqibezele le mission elinikiweyo lula. Ezi uhamba eziyimfuneko ukuze siqhubeke ihamba phambili.
Gcina uqhele The Izitha.
Ukuba wenza ukhetha i ubuso ngobuso enqanda, ngoko les imephu ukudubula inkwenkwezi yinto efanelekileyo ukwenza kule meko. Siza kuqhuba ukuba ezinye iimephu eziya kuhambelana isimbo yakho edlala akukho xesha.
Kwaye isicelo sakho apha. ufake imephu Star Gulch. It has a zahlukile iimeko kakhulu nakulwa ukuba adlale phaya. kufuneka wenze umxube ekunene kwaye khetha abo kulindeleke ukuba icule endle apho ngempumelelo.
Siyayiqonda ukuba ikunike enye phezulu bayilimaza Stars kugula kude umhla : http://newstarship.com
Kunye nengxabano Iinkwenkwezi zizame, uya ukuphatha ukufumana Brock le angaxokozeliswa. Le mephu nguye ogqibeleleyo ubuchule bakhe wakwazi kukhanya apho lula.
Lo mdlalo ukhetho egqibeleleyo kuba abo babefuna ngokukhawuleza ngokukhawuleza imidlalo edlalwa online. Yaye isibakala esazi ukuba mdlalo ngokupheleleyo isekelwe kwinqanaba wakho ubuciko kwaye akukho ndawo for kids kule game.
eneneni Oku luyaphucuka uluntu kunye nokunceda ngayo ukuphucula ezinkulu kakhulu yaye ngokukhawuleza ngaphandle kwamathandabuzo. Kwaye kunye nengxabano Iinkwenkwezi zizame, esinayo iitoni ukuvulwa lweempawu ngaphakathi bonke ziyafumaneka kuwe esandleni sakho ngonqakrazo olunye.